AMISOM oo ku baaqday ilaalinta dadka rayidka ah ee Soomaaliya - Sabahionline.com
AMISOM oo ku baaqday ilaalinta dadka rayidka ah ee Soomaaliya
Agoosto 17, 2012
AMISOM ayaa sii wadi doonta mudnaanta ay siiso ilaalinta rayidka Soomaaliyeed dagaalka milatari ee ka socda Soomaaliya, sidaana waxa Khamiistii (16-kii August) sheegay Wakiilka Gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Boubacar Diarra.
Midowga Afrika oo Soomaaliya ugu hambalyeeyay dastuurka
Ciidamada Soomaailya iyo kuwa Midowga Afrika oo 2 magaalo ka xoreeyay al-Shabaab
"AMISOM waxa ay si dhab ah u qaadanaysaa mas'uuliyadda ka saaran ammaanka dadka Soomaaliyeed waxayna fahamsantahay waajibka ka saaran in ay fuliso howl-galladeeda iyada oo aan wax khatar ah galin shacabka gudaha ku nool," ayuu yiri Diarra.
Waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay muhiim u yihiin guusha howl-galka AMISOM. Waxa uu "dareen wayn" ka muujiyay warbixinno Kismaayo ka soo baxay oo sheegaya khasaare nafeed, isaga oo intaa raaciyay in warbixintaa la baari doono.
Warbixinta ayaa ka hadashay in maraakiibta dagaalka ee fadhiya xeebaha kulaala Kismaayo ay rasaas is dhaafsadeen dagaalyahaniinta al-Shabaab ee ku sugan Kismaayo, halkaa oo ay ugu yaraan ku dileen saddex afar kalena ay ku dhaawacmeen.
"Waxan ku adkeeynaynaa ciidamada millatari ee kale in ay muujiyaan taxaddar iyaga oo maanka ku haya in ay jiraan aagag ay ku nool yihiin shacab aad u tira badan," ayuu yiri.
Ciidamada AMISOM ayaa lagu tababaray arrimaha la xiriira sharciyada caalamiga ah ee bini'aadanimada waxana arrinka ilaalinta dadka rayidka ah uga yaal siyaasado, ay ka mid yihiin in aan wax dab ah laga ridin meelaha ay dadku ku badan yihiin, ayuu yiri, isaga oo intaa raaciyay in dadaalka ay AMISOM ka muujiso ilaalinta dadka rayikda ah uu aqoonsaday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo ururro kale oo caalami ah.
Waa wax aad u wacan in aan aragno in dunidu ay haatan usoo jeesatay qadiyada Soomaaliya, sababtoo ah arrinkaasi wuxuu caawin doonaa dadka soomaaliyeed, laakiin wax faa’ida ah la gaadhi maayo haddii aysan dadka Soomaaliyeed wada shaqayn la imaanin si ay mushkilada haysata u xaliyaan. Hadii aysan soomaalidu midoobin, oo aysan la imaanin go’aan ay ku go’aansadaan inay mashaakilka dhexdooda ka jira xaliyaan, isku day kasta oo dibada ka yimaada oo la iskugu dayo in mushkilada la xaliyaa wuu fashilmi doonaa.
Waxaan ciidamada Amisom ugu ducaynayaa inay si wadajir ah u wada shaqeeyaan oo ay soo afjaraan dhibaatooyinka, Geeska Afrikana nidaam iyo kala dambayn kusoo dabaalaan. Dadka Soomaaliyeedna waa inay ogolaadaan caawimada caalamku u fidiyay, si dalkooda xasilooni looga hirgaliyo.